Maamulka Gobolka Banaadir oo sheegay in dad loo soo qabtay dilkii xalay ka dhacay Xamar Weyne | Baydhabo Online
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Eng. C/raxmana Cumar Cusmaan (Yariisow) ayaa sheegay in ciidamada booliska ay gacanta ku soo dhigeen dad looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen dilkii xalay ka dhacay Xamar Weyne.
Guddoomiye Yariisow oo uu wehliyay Taliyaha Booliska Jen. Bashiir ayaa xalay saqdii dhexe kormeero ku kala bixiyay Isgoysyada ay ciidamada ammaanka ka sugnaa amniga Caasimadda, isagoo bogaadiyay sida howsha u socoto.
Sidoo kale Guddoomiyaha ayaa sheegay in Ciidanka Booliska ay diyaarsan yihiin, ayna 24-saac heegan yihiin, iyagoo shacabka u shaqeynaya.